Sebenzisa amaqhosha e-multimedia kuphela nge-iTunes okanye nge-Spotify, kwi-MacOS High Sierra | Ndisuka mac
Sebenzisa amaqhosha e-multimedia kuphela nge-iTunes okanye nge-Spotify, kwi-MacOS High Sierra
UJavier Porcar | | Ezinye iiNkqubo zeMac, Ezahlukeneyo
Nayiphi na inkqubo yokusebenza izisa uphuculo oluninzi, kodwa kwezinye iimeko siphulukana nomsebenzi othile. Le misebenzi ihlala ifunyanwa kwiinguqulelo ezilandelayo, kodwa kuzo zonke iimeko. Ukuba songeza ukuba sisebenzisa eli nqaku phantse yonke imihla, kunokwenzeka ukuba siphulukane nemveliso. Ukusukela ukukhutshwa kweMacOS ePhakamileyo yeSierra, indlela yokuziphatha kwezitshixo zemultimedia zeMac yethu itshintshe indlela yokuziphatha. Ngoku, amaqhosha alandela isicelo esisenzileyo kwibar yomsebenzi (ngasentla ngasekhohlo). Ewe namhlanje, siyayazi isicelo Isilumko esiPhezulu seSierra seMithombo yeendaba esivumela ukuba sitshintshe le ndlela yokuziphatha.
Isicelo simahla kwaye sinokuba njalo khuphela kwiphepha lonjiniyela. Oku kuluncedo ngakumbi kwabo basebenzisi, apho badlala khona imixholo evela kwi-iTunes ngaphezulu okanye kancinci rhoqo. Ukudlala ividiyo efunyenweyo, umxholo wewebhu okanye iMessage, iba ngumsebenzi ongenamveliso. Kwimeko apho, kuya kufuneka ubeke bucala umsebenzi okhoyo ngoku, yiya kwi-iTunes, yeka okanye yehlise ukudlala komzuzu kwaye ubuyele kwingoma ekuthethwa ngayo. Kwabaninzi, oku kubonakala ngathi yi-MacOS High Sierra bug, kodwa ayilungiswanga kuhlaziyo lwamva nje lwe-10.13.1. kwaye asazi ukuba siza kubona ithuba lokumisela le parameter kwiinguqulelo zamva. Umphuhlisi usixelela izizathu zokwenza isicelo:
Itshintshe indlela yokuziphatha kwezitshixo zemultimedia. Abasalawuli i-iTunes, balawula ukudlala kwevidiyo kwi-Safari. Oku kuyabakhathaza abantu abaninzi kubandakanya nam, ke ndenza i-app yebar yemenyu ephatha i-iTunes / Spotify kuphela, ngelixa iApple ilungisa oku. Ayiyixhasi iTouch Bar okwangoku, ngamaqhosha omzimba kuphela.
Isicelo siphuhliswa ngu UMilan toth. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye ijolise ikakhulu ekutshixeni amaqhosha eendaba kwi iTunes okanye kwiSpotify. Ke ngoko, imisebenzi eqhelekileyo njengokuvula ividiyo kwiYouTube okanye umyalezo ofunyenweyo, awuyi kuthintela amaqhosha ekuphenduleni kuphela kwaye ngokukodwa kwiinkqubo zangaphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Sebenzisa amaqhosha e-multimedia kuphela nge-iTunes okanye nge-Spotify, kwi-MacOS High Sierra
I-Fidel GB sitsho
Enkosi!!! Oko ndanyuselwa kwi-sierra ephezulu ndandinqwenela ukuba ndifuna ukuvelisa kwakhona ilayibrari ye-itunes kwaye bendihlala ndidlala iividiyo ze-safari okanye nantoni na kwaye bendisele ndidiniwe! kodwa le app indifanela njengeglavu, Enkosi !!!!
Phendula kwi-Fidel GB
I-Mafia II: ICandelo loMlawuli, likwathengiswa ixesha elincinci
Iphini likamongameli we-Apple lokwahluka kunye nokubandakanywa kuya kwehla ekupheleni konyaka